Intshayelelo yeGesi Chromatography
I-chromatography yeGesi (GC) yindlela yokuhlalutya esetyenziselwa ukwahlula nokuhlalutya iisampuli ezinokuphefumulwa ngaphandle kokuchithwa kwe- thermal . Ngamanye amaxesha i-chromatography yegesi iyaziwa njenge-gas-liquid partition chromatography (GLPC) okanye i-chromatograph phase-phase chromatography (VPC). Ngokwenene, i-GPLC yimizuzu echanekileyo, kuba ukuhlukana kwamacandelo kulolu hlobo lwe-chromatography lithembela kumbambano wokuziphatha phakathi kwesigaba segesi esinqumlayo kunye nesigaba samanzi esisigxina .
Isixhobo esenza i-chromatography yegesi kuthiwa yi- chromatograph yegesi . Igrafu ephumela kubonisa ukuba idatha ibizwa ngokuba yi- chromatogram yegesi .
Ukusetyenziswa kwe-Chromatography yeGesi
I-GC isetyenziselwa uvavanyo olulodwa ukunceda ukuchonga amacandelo omxube wamanzi kunye nokucacisa ukuxilongwa kwabo . Ingasetyenziselwa ukwahlula nokuhlambulula izixhobo zomxube. Ukongezelela, i-gas chromatography ingasetyenziselwa ukucacisa uxinzelelo lwe-vapor , ukushisa kwesisombululo kunye nezenzo zomsebenzi. Amashishini asetyenziswa rhoqo ukujonga iinkqubo zokuvavanya ukungcola okanye ukuqinisekisa ukuba inkqubo iya kulungiswa. I-Chromatography inokuvavanya utywala lwegazi, ukuhlambuluka kweziyobisi, ukucoceka kokutya, kunye nobunzima beoli. I-GC ingasetyenziselwa kuhlalutyo lwezinto eziphilayo okanye ezingabonakaliyo, kodwa isampuli kufuneka ibe yintsholongwane . Ngokufanelekileyo, iinqununu zesampuli kufuneka zibe namaqondo ahlukeneyo abilayo.
I-Gas Chromatography isebenza njani
Okokuqala, isampuli yamanzi isilungisiwe.
Isampuli ixutywe kunye ne-solvent kwaye ifakwe kwi-chromatograph yegesi. Ngokuqhelekileyo ubungakanani besampula bubuncinci - kwinqanaba le-microliters. Nangona isampuli iqala njengowomanzi, iphefumlelwe kwisigaba segesi. Igesi ephethe i-inert iphinda idlulele kwi-chromatograph. Le gesi ayifanele isabele ngayo nayiphi na inxalenye yomxube.
Iigesi eziphathekayo eziqhelekileyo ziquka i-argon, i-helium, ngamanye ama-hydrogen. I-sampuli kunye ne-gesi yenqwelo ishushu kwaye ifake ibhubhu ende, esele iqokelelwe ukuze kugcinwe ubukhulu bechromatograph. Ityhubhu ingavulwa (ebizwa ngokuba yi-tubular okanye i-capillary) okanye izaliswe ngezinto ezixhasayo zenkxaso (inqaku elipakiweyo). I-tube ithuba ixesha elide ukuvumela ukuhlukana okungcono kwezinto. Ekupheleni kwebhubhu ngumtshini, orekhoda inani leesampula elithathayo. Kwezinye iimeko, isampuli ingabuyiselwa ekupheleni kwikholam, nayo. Iimpawu ezisuka kumtshini zisetyenziselwa ukuvelisa igrafu, i-chromatogram, ebonisa inani lemodeli efikelela kumtshini kwi-y-axis kwaye ngokubanzi ngokukhawuleza kufinyelele njani kumtshina kwi-axis (x kuxhomekeke kwinto kanye umtshina ). I-chromatogram ibonisa uluhlu lweentonga. Ubungakanani beentlanzi zixhomekeke ngokuthe ngqo kumlinganiselo wecandelo ngalinye, nangona alinakusetyenziswa ukulinganisa inani leemolyuli kwisampuli. Ngokuqhelekileyo, ukuphakama kokuqala kuvela kwi-gas carrier ye-inert kunye nenqanaba elilandelayo isisombululo esisetyenziselwa ukwenza isampuli. Iintsika ezilandelelanayo zimela amacube kumxube. Ukuze uqaphele iingqungquthela kwi-chromatogram yegesi, igrafu kufuneka ifaniswe i-chromatogram ukusuka kumxube osemgangathweni (owaziwayo), ukuze ubone apho ziphakame khona.
Ngeli nqanaba, unokuba uzibuza ukuba kutheni amacandelo omxube ahlukeneyo ngelixa aqhutywe kwi-tube. Ingaphakathi kwiphubhu ibhanwe ngumqolo osisigxina samanzi (isigaba esiphezulu). Igesi okanye umphunga ngaphakathi kwiphubhu (isigaba somphunga) sihamba ngokukhawuleza kunokuba iamolekyu esisebenzisana nesigaba samanzi. Amacandelo asebenzisana kangcono kunye nesigaba segesi badla ukuba neendawo ezincinci zokubilisa (zinyanisekile) kunye nezilwanyana eziphantsi kwee-molecular, ngelixa izixhobo ezithandayo isigaba esiphezulu ziba neendawo eziphezulu zokubilisa okanye zinzima. Ezinye izinto ezichaphazela izinga apho iqela liqhubela phantsi kwikholamu (ebizwa ngokuba lixesha lo-elution) liquka ubumnyama kunye nobushushu bekholam. Ngenxa yokuba ubushushu bubaluleke kakhulu, ngokuqhelekileyo kulawulwa kwisithuba seshumi kwisidanga kwaye kukhethwe ngokusekelwe kwindawo yokubilisa yomxube.
Izixhobo ezisetyenziselwa i-Chromatography yeGesi
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zokufumana izixhobo ezingasetyenziswa ukuvelisa i-chromatogram. Ngokuqhelekileyo, zinokuhlulwa njengezikhethiweyo, oko kuthetha ukuba baphendule kuwo onke amaqumrhu ngaphandle kwegesi yenkampani, ekhethayo , ephendula kwiindlela ezininzi eziphathekayo kunye neendawo ezithile , eziphendula kuphela kwiqela elithile. Abahloli abahlukeneyo basebenzisa gesi zenkxaso ezithile kwaye banamaqondo ahlukeneyo okuvakalelwa. Ezinye iindidi eziqhelekileyo zabahloli ziquka:
Detector IGesi yoNcedo Ukhetho Umgangatho wokuThola
I-Flame ionization (FID) i-hydrogen nomoya ezininzi zendalo 100 iphe
Ukuqhuba kwe-thermal (TCD) niselo yonke 1 ng
I-Electron ifom (i-ECD) iinto zokuzilungisa nitriles, nitrites, halides, organometallics, peroxides, anhydrides 50 fg
Ifoto-ionization (PID) iinto zokuzilungisa i-aromatics, i-aliphatics, i-esters, i-aldehydes, i-ketoni, i-amine, i-heterocyclic, i-organometallic 2 iphe
Xa inkxaso yegesi ibizwa ngokuthi "yenze igesi", ithetha igesi isetyenziselwa ukunciphisa ibhanti yokwandisa. I-FID, umzekelo, i-nitrogen gas (N 2 ) isetyenziswa rhoqo. Incwadana yomsebenzisi ehamba ne-gas chromatograph ichaza iigesi ezingasetyenziswa kuyo kunye nezinye iinkcukacha.
UPavia, uDonald L., uGary M. Lampman, uGeorge S. Kritz, uRandall G. Engel (2006). Isingeniso kwiindlela zeLebhu yeeLebhu (i-Ed. 4) . Thomson Brooks / Cole. iphe. 797-817.
Grob, uRobert L .; UBarry, u-Eugene F. (2004). Ukusebenza Kwemihla YesiGesi Chromatography (4 Ed.) . John Wiley & Son.
Ngaba Kukhuselekile Ukusela Amanzi ku-Hose?
Iingxelo zeNkcazo zikaCharles Perrault
Ukuguqula i-Excel Spreadsheet kwiData lokuSebenza lika-2013
Xa Umntwana Wakho ongumKristu eqala ukutshata
Yintoni i-Tip-of-Tongue Phenomenon?
Iglosari: Inshallah, okanye Insha'Allah